Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » UNWTO waxay mamnuucday saxafada halista ah ee suuqa socdaalka aduunka
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • LGBTQ • Shirarka • News • Dadka • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka Mareykanka • Wtn
Saxaafadda xorta ahi waxay aasaas u tahay bulsho dimuqraadi ah. Waxay raadisaa oo faafisaa wararka, macluumaadka, fikradaha, faallooyinka, iyo ra'yiga, waxayna la xisaabtantaa kuwa madaxda ah. Saxaafaddu waxay bixisaa madal lagu maqlo codad badan. Heer qaran, heer gobol, iyo heer deegaan, waa ilaaliye, u dhaqdhaqaaqa, iyo masuulka dadweynaha iyo sidoo kale baraha, maaweelada, iyo taariikhyahanka casriga ah. Sida muuqata kaligood-taliyayaashu waxay ka baqayaan ilaaliye guud oo noocaas ah, sidoo kale Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili.
UNWTO waa hay'ad Qaramada Midoobay ku xidhan oo hoos timaada sharciga caalamiga ah.
Hadda, UNWTO waxay leedahay Xoghaye Guud oo aan sharci ahayn oo ururka u maamula sidii keligii taliye. Marka loo eego tafsiir sharci oo uu bixiyay qareenka ku lug lahaa abuurista siyaasadaha UNWTO, SG Zurab Pololikashvilihe waxa la dhigay kaliya wax is daba marin. Doorashada bilowga ah ee 2018 waa in aan la aqoonsan.
Xoghayaha Guud waxa uu ku guulaystey in uu iska ilaaliyo dhammaan su’aalihii saxafada ee muhiimka ahaa tan iyo markii uu xilka qabtay January 1, 2018. Maanta waxa ay tusaale u ahayd sida ay UNWTO uga fogaato in ay afka ka xidho cid kasta oo aan ku heshiin Xoghayaha Guud.
Shir-madaxeedkii ugu horreeyay ee heer wasiir ah oo lagu qabto Suuqa Socdaalka Adduunka tan iyo markii uu cudurku faafay, ayaa maanta ka dhacay magaalada London ee xarunta WTM World Stage ee Xarunta Bandhigga Excel.
Sida had iyo jeer, wasiiradu waxay shirayeen si ay uga wada hadlaan arrimaha khuseeya Dalxiiska Adduunka iyo xaaladda warshadaha. Si la mid ah tan iyo markii UNWTO loo aasaasay hay’ad UN ka ah, saxafiyiinta ayaa ka mid ahaa dadkii goobta joogay, balse su’aalo ma aysan weydiin karin. Doodda wasiirka ka dib, waxa caado u ahayd in shir jaraa’id la qabto.
Waxaas oo dhami waxay is beddeleen Janaayo 1, 2018, markii Zurab Pololikashvili uu noqday mas'uulka dalxiiska adduunka.
Shirar-jaraa'id oo lagu qabtay bandhigyada ganacsiga ee waaweyn ama miisaska wasiiradda ayaan hadda dhicin. Zurab kaliya wuxuu u muuqdaa sawir-qaadis waana la waayayaa.
Intii lagu jiray xiisadda COVID-19 oo dhan, Xoghayaha Guud ee UNWTO wuxuu ka fogaaday dhammaan saxafada muhiimka ah. Maanta oo uu ku sugan yahay magaalada London, xoghayaha guud ayaa tallaabo dheeraad ah ka qaaday.
Si looga fogaado jawaab celin ama su'aalo kasta oo dhaliil ah, wuxuu si badheedh ah liiska madow ugu daray saxafiyiinta wax ku qora qoraalada sidan oo kale ah. eTurboNews.
Sababta: eTurboNews wuxuu ahaa mid aad u dhaliila Xoghayaha Guud.
Ka fogaanshaha aragtida xun ayaa xitaa aad muhiim u ah maanta, maadaama Zurab Pololikashvili uu u taagan yahay mar labaad, iyo dib-u-doorashadiisa waxay u baahan tahay in dib loo xaqiijiyo Golaha Guud ee Madrid.
Ka dib markii uu ku guuleystay talada muddada labaad ee Golaha Fulinta bishii Janaayo sababo la xiriira khalkhalgelinta culus, ka dib markii ay ku guulaysteen in ay beddelaan goobta Golaha Guud ee Madrid, waxay siinaysaa faa'iido cad in Zurab dib loogu cusboonaysiiyo mar labaad oo ah Xoghayaha Guud ee UNWTO dhamaadka bishan. Su'aalaha muhiimka ah uma roona isaga.
Kulanka maanta ee wasiirada ee WTM London wuxuu ahaa mid ka mid ah hawlahaas uu ka qayb galay markii ugu horeysay tan iyo COVID. Wuxuu u baahday inuu si fiican u eego toddobaadyo ka hor dhegeysigiisa xaqiijinta, laakiin ma uusan wajihin warbaahinta.
Mudane. Najib Balala, Xoghayaha Dalxiiska ee Kenya, ayaa waxaa diiday UNWTO usbuucii hore, ka dib markii uu ku casuumay shirka Golaha loo dhan yahay in lagu qabto Kenya, bedelkii Madrid.
Wasiir Balala ayaa maanta ku sugnaa magaalada London oo uu ka qeyb galay shirka Wasiirada. Waxaa loo sheegay in aysan jirin kuraas kale oo wasiiro ah. Daqiiqado ka dib markii uu soo galay ayuu ka baxay dhacdada, isagoo u warramaya eTurboNews daabace, Juergen Steinmetz, oo ku sugayay albaabka laga baxo.
Dhammaan saxafiyiinta ka qayb galaya WTM ayaa u fadhiistay xaflada, marka laga reebo eTurboNews waxaa matalaya Juergen Steinmetz. Waxa laga dhigay qof aan grata ahayn, looma ogola inuu galo shirwaynaha.
eTurboNews waa lammaane warbaahineed oo rasmi ah oo ka tirsan Suuqa Socdaalka Adduunka, laakiin tani wax isbeddel ah ma samayn. eTurboNews ayaa waxaa u hanjabay sarkaal ka tirsan Qaramada Midoobay markii uu muuqaal ka qaadayay dhacdadan.
UNWTO waxay u muuqataa inay ku guulaysatay inay iska ilaaliso dhaleeceynta by warbaahinta guud ee waaweyn.
CNN tusaale ahaan waa lammaane warbaahineed oo rasmi ah oo malaayiin doolar xayeysiis ah ka hela goobaha dalxiiska. Kooxda Task Group ee CNN waxaa la sameeyay UNWTO Anita Mendiratta, oo ah la taliyaha sare ee Xoghayaha Guud. Kooxda Task Group ee CNN ujeedadeedu waa inay iibiso xayaysiis. Kooxdan waxaa la sameeyay sanado ka hor, markii hore eTurboNews lammaane ahaan. waxayna ahayd eTurboNews taasi waxay aragtay iska hor imaadka danta waxayna ka tagtay kooxda iyadoo ay harsan yihiin CNN, UNWTO, ICAO, iyo IATA.
Marcelo Risi, oo mas'uul ka ah isgaarsiinta UNWTO, ayaa diiday inuu la hadlo Steinmetz. Waxaa la arkayay isaga oo ka cararaya xaaladda, isagoo leh: "Juergen, mashquul baan ahay."
Tani maaha oo kaliya xaalad laga xishoodo, laakiin waa xadgudub cad oo ka dhan ah xorriyadda saxaafadda iyo kiis cad oo takoorid ah.
Ma aha oo kaliya Steinmetz ma matalay eTurboNews, laakiin sidoo kale waa Guddoomiyaha Golaha Shabakada Dalxiiska Adduunka, urur dalxiis oo caalami ah. Steinmetz sidoo kale waa xubin ka mid ah guddiga fulinta ee Guddiga Dalxiiska Afrika.
Waxa uu isku dayay in uu la xiriiro qabanqaabada shir madaxeedka Wasiirada oo ah Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC), balse mas’uuliyiintii albaabka ku sugnaa ayaa diiday in uu la hadlo mas’uul ka tirsan WTTC, iyaga oo sheegay in aysan garaneyn waxa ay WTTC u taagan tahay. waayo.
Kulan gaaban oo ay la yeesheen WTTC munaasabadda ka dib, madaxda ururkaas ayaan la ogeyn waxa dhacay.
Daawo muuqaalka iPhone oo muujinaya sida ay xaaladdu u socoto: